AMD (ATI) iyo dhibaatooyinkeeda daa'in | Laga soo bilaabo Linux
dabogal 92 | | Naqshad, GNU / Linux, Noticias
Tan iyo markii aan ka soo gudbay Windows 7 kan ugu horeeya Linux ficil ahaan waxay ahayd sanad ka hor nasiib darose waxay ahayd inaan la macaamilo kaar ATI (AMD) taas oo igu kaliftay in ka badan hal madax xanuun, taasoo u keentay xaasidnimo xoogan dadka isticmaala a NVIDIA ama xitaa mid Intel isku dhafan.
Markaan garowsaday taas darawallada bilaash radeon iyagu waa kuwo ku habboon kombuyuutarka desktop-ka, sidoo kale waxaan aqoonsanahay inay khatar ku yihiin laptop-ka, tusaale ahaan laptop-kayga wuxuu si fudud ugu gaari karaa 99 digrii kuwaan darawallada nasiib darose dadka adeegsada laptop-ka waxaan kaliya u isticmaali karnaa wadayaasha Galiye, kuwaas oo waxbadan hagaajiyay tan iyo markii ugu horeysay ee aan isku dayay iyaga (11.4 Maajo) laakiin wali ma gaarin kabaha kabaha haweenka NVIDIA.
Isticmaalayaasha ATI waxaan si xoogan u dalbaneynaa inaan ku raaxeysan karno taageerada sharafta leh, in aysan kaliya aheyn ereyo, kaliya balanqaadyo, waxaan dooneynaa qaar darawallada si aan ugu ciyaarno filim HD ah adigoon culeys badan saarin processor-ka, waxaan rabnaa maktabada xvba-video inay runtii u shaqeyso sida vdpau ee dadka isticmaala NVIDIA, Uma maleynayo inay tahay wax badan in la weyddiiyo, in la helo xawaare GPU oo hufan, xitaa haddii ay ahaan laheyd kalabar waxa aad ku raaxeysan karto Windows.
Waa wax laga xishoodo in aniga Radeon HD 4650 1GB wuxuu umuuqdaa garaaf 10 euro ah, runti waa wax laga xishoodo, waxaan si kal iyo laab ah u rajeynayaa sanadkaan inagu soo food leh, AMD baytariyada gelin karaa oo naga dhigi kara inaan maskaxdeena u bedelno dhammaan kuwa Linux-yada ah iyo in sawiradooda ay dhab ahaan noqon karaan bedel.
Mid baan iibsanayaa Intel, oo maxaad sameyn doontaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » AMD (ATI) iyo dhibaatooyinka weligeed ah
Kaalay, lammaane cusub.
Hal shay, iska ilaali cinwaannada waaweyn, hoos u dhig marka xigta
Waxaan rajeynayaa inaadan u qaadin wado qaldan
Hagaag, si fiican dhib malahan, horey ayaan usameeyay xD.
Ii iibso Marka laga hadlayo iibsashada Intel, laakiin waxaan ahay faqiir waana inaan ku tuuraa Hasefroch nasiib daro
Waxaan kumbuyuutarkayga ku iibsanayaa qaybo, ma haysto lacag aan ku wada iibsado hal mar, markaa marka hore waxaan soo iibsaday Motherboard-ka iyo wanka iyo dhammaadka bisha, intel i5 oo leh sawirro isku dhafan.
Waa tan ugu fiican, markaa waxaad dooraneysaa jajabyada iswaafajinaya ugu badnaan mana bixinaysid ruqsadaha waxyaabaha aadan isticmaaleynin
Ah Courage, pandev92 USA ChakraMid kale oo ka mid ah baaxadeena JUAS JUAS JUAS !!!
Waxaan ka faaiidaysanayaa fursadan waana kugu soo dhaweynayaa dabogal 92 ilaa goobta 😀
Farxad ayey ii tahay inaan halkan kugula joogo, mar hore ayaan badan nahay ... tan waxaan dhammaanteen ku baran doonnaa wax badan, waxaan heli doonnaa khibrad, waadna arki doontaa ... markii aan filayno ugu yaraan, waan ka badnaan doonnaa waxyaabaha aan filayno
Gaara Gaara. Waxaan sidoo kale salaamayaa Pandev waxaanan rajaynayaa in dad badan oo doonaya inay la wadaagaan aqoontooda (maqaallada ku jira baloogga) ay ku xirmi doonaan Desdelinux.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, Pandev. Si aan uga jawaabo su'aashaada, waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado midka ugu fiican Core i7 sanadka soo socda, oo wata kaarka sawirada isku dhafan, laakiin waa inaan waxbadan keydsadaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay maalgelin qiimo leh, waxaan haysan lahaa kombuyuutar muddo dheer. Waxaan rabaa inaan naftayda u huro abuurista iyo tafatirka fiidiyowga, laakiin laptop-kayga 'Sony VAIO' laga bilaabo Oktoobar 2006 ma cabiro. Dabcan, wax kasta oo kale waxay u shaqeysaa si fiican laba sano oo aan bilaabay isticmaalka Linux. Haatan waxaan ka qorayaa laptop-ka yar, oo la yimid Güindous 7 "Starter", anigoon ka fiirsan laba jeer ayaan iska saaray, heh heh.
wax nvidia magac u leh ... deegaanka GNU / Linux waa kan ugu fiican.
Hagaag haa, waxay inagu wada keenaysaa nvidia ahahah xD
Hagaag, waligey dhibaato iguma qabin ati 5450 (desktop) iyo wadayaasha wax soo saaraha. In kasta oo waxqabadka iyo heerkulka la xusay in aysan gaarsiisnayn heer.
Hadda waxaan isticmaalaa nooca 11.11.
Processor maxaad haysaa Waxaan haystaa amd turion x2 oo hadaan arko hd buuxa labadan koronto dabka 100%, taa bedelkeed vlc daaqadaha waxay cuntaa 1%
Waxaan hayaa Intel oo bilaabaya gabow ...
Waxaan tijaabiyey fiidiyow buuxa oo wuxuu marayaa 50-70%. Laakiin wadayaashu ima niyad jabaan (in kasta oo ay wax badan horumarin karaan iyo inbadan). Ku hay muddo dheer oo ku filan inuu ku ciyaaro X-diyaarad 9 oo aan lahayn sawiro aad u sarreeya laakiin ku filan.
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay maqaalka. Waxaan xasuustaa markaan rabay inaan tijaabiyo Gnome-Shell, waxay ahayd masiibo dhameystiran, marka waxaan sii daayay darawalada oo ukun ku shiilan karaa kumbuyuutarkeyga laptopka, sidaa darteed waxaan dib ugu noqday Kaltuleytar oo waxaan uga cararay Gnome-Shell sidii shaydaanka oo kale. Ma aqaano sida ATI uu ugu dhaqmo daaqadaha, laakiin Linux wuxuu kaga tagayaa waxyaabo badan oo la doonayo.
Waxaan isku dayay inaan u adeegsado Ubuntu 10.10 live cd, mashiin raqiis ah laakiin wanaagsan oo aan dhawaan helay. Waxay leedahay processor e350 oo leh radeon 6310 mana rarto midnimada. Si layaab leh Lubuntu waxay ku dhejisay desktop-ka. Waxaan hayaa dhowr mashiinno intel ah oo leh 945 chipset ah iyo haddii aan ku guuleystey inaan arko filimada hd ilaa 720px, dabcan vlc iyo wax walba xira. Marwalba waxaan raadsadaa hd 486px runtuna duco maahan. Marka laga reebo kaararka waxaan sidoo kale la halgamay koodhadh lahaansho ee warbaahinta dhabta ah, kuwaas oo aan lahayn wax u dhigma linux.
Sidoo kale waxaan kula dagaallamayaa ATI kombuyuutarkeyga xD waana kaa liitaa taas maxaa yeelay ATI waxay joojisay taageerada ay siineysay kaarkayga sidaa darteed ma adeegsan karo wadayaasha baabuurta, waxaan raacaa kuwa bilaashka ah, runta ayaa ah, inay wax badan horumar sameeyeen, laakiin wali shaqo ayaa jirta. Waxaan rajaynayaa in nooca soo socda ee Kubuntu laptop-kaygu uu isku dayi doono wax kayar oo uu sameeyo iyadoo kuxiran waxyaabaha xP
Tani waxay u egtahay mid la yaqaan…. HAHA.
Guriga waxaan ku haystaa Ati Radeon 9250 ... XUN oo Ati uu u sameeyay dadka isticmaala Linux _¬
Hubi goobaha ay wax ka jiraan, waxaad akhrin doontaa in Ati Radeon 9200 uu yahay wax laga yaqyaqsoodo, sidoo kale ... 9250-ka xitaa waa ka xun yahay !!!
Waxaan haystaa kumbuyuutar leh Ati Radeon 9200 se, Qof ayaa kugula talin kara distro nooca sawirada. taasi waxay la imaaneysaa jawi desktop ah oo cunaya ilaha yar. (Xfce, lxde, ama maareeyaha daaqadda Openbox) Mahadsanid.
Maxaan ka filan karnaa Fedora 17?